စိတ်ကြိုက် ဝန်ဆောင်မှုများ ပညာရေး in ဂျာမနီ ဂျာမနီမှာပညာသင်ချင်တဲ့ကျောင်းသားတွေအတွက် တက္ကသိုလ် of ဂျာမနီ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောင်းဆုံးမှတဆင့် ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ ဘို့ ဂျာမနီလည်းအဖြစ်လူသိများ, ဂျာမနီမှာရှိတဲ့ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ ဘို့ ဂျာမနီ ကျောင်းသားများအတွက် ပြည်ပမှာလေ့လာမှု in ဂျာမနီအဓိက ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ ပညာရေး in ဘာလင် သို့ လေ့လာချက် in ဘာလင် in တက္ကသိုလ်က of ဘာလင် ကပံ့ပိုး အကောင်းဆုံး ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ ဘို့ ဘာလင် ပေး ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ ဘို့ ဘာလင် ပညာရေး in Cologne သို့ လေ့လာချက် in Cologne in တက္ကသိုလ်က of Cologne ကပံ့ပိုး အကောင်းဆုံး ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ ဘို့ Cologne ပေး ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ ဘို့ Cologne ပညာရေး in Frankfurt သို့ လေ့လာချက် in Frankfurt in တက္ကသိုလ်က of Frankfurt ကပံ့ပိုး အကောင်းဆုံး ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ ဘို့ Frankfurt ပေး ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ ဘို့ Frankfurt ပညာရေး in ဟမ်းဘတ် သို့ လေ့လာချက် in ဟမ်းဘတ် in တက္ကသိုလ်က of ဟမ်းဘတ် ကပံ့ပိုး အကောင်းဆုံး ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ ဘို့ ဟမ်းဘတ် ပေး ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ ဘို့ ဟမ်းဘတ်.
အကောင်းဆုံး ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ in ဂျာမဏီ | အကောင်းဆုံး ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ in ဘာလင် | အကောင်းဆုံး ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ in Cologne | အကောင်းဆုံး ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ in Frankfurt | အကောင်းဆုံး ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ in ဟမ်းဘတ်
ပညာသင်နှစ် (အောက်တိုဘာ - စက်တင်ဘာ)
ဂျာမနီ သစ်တောများ၊ မြစ်များ၊ တောင်တန်းများနှင့်မြောက်ပင်လယ်ကမ်းခြေရှုခင်းများရှိသောအနောက်ဥရောပနိုင်ငံဖြစ်သည်။ ဂျာမနီသည် '' သုတေသနတက္ကသိုလ် '' ၏မွေးရပ်ဇာတိနေရာဖြစ်ပြီးဆင်စွယ်တာဝါတိုင်များနှင့်စာကြည့်တိုက်များရှိသောနေ့တိုင်းဗဟုသုတအသစ်များထွက်ပေါ်လာသည်။
အဆိုပါ ဂျာမန်အစိုးရ လုပ် အဆင့်မြင့်ပညာရေးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဦး စားပေး။ သုတေသနနှင့်ပညာရေးအရည်အသွေးအပေါ်အပြုသဘောသက်ရောက်မှုမှသည်ပညာရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဂုဏ်သိက္ခာကိုတိုးမြှင့်ခြင်းအထိနိုင်ငံတကာအကျိုးသက်ရောက်မှုသည်အကျိုးကျေးဇူးများစွာရရှိစေသည်။
အများအားဖြင့် ဂျာမန်ပညာရေးစနစ် နိုင်ငံတော်တော်များများနှင့်ကွဲပြားသော်လည်း၎င်းသည်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်ကျောင်းသားများအားအကျိုးပြုသည်။ ဂျာမန်ကျောင်းသားအများစုသည်အစိုးရကျောင်းများသို့တက်ကြသည်။
သိရန်လိုအပ်သည် - ဂျာမနီတွင်ပညာသင်ပါ
ဂျာမနီ၌ပညာသင်ကြားခြင်း ဂျာမနီရှိပညာရေး | ဂျာမနီမှာနိုင်ငံခြားမှာလေ့လာပါ
ဘာလင်မှာပြည်ပမှာလေ့လာပါ | Cologne အတွက်ပြည်ပမှာလေ့လာပါ | ဖရန့်ဖတ်၌နိုင်ငံခြားတွင်ပညာသင်ပါ | Hamburg မှာပြည်ပမှာလေ့လာပါ | ဘာလင်ရှိပညာရေး | Cologne အတွက်ပညာရေး | ဖရန့်ခ်ျဖူတ့်ပညာရေး | Hamburg ပညာရေး
ဂျာမနီတစ်လွှားတွင်လယ်ကွင်းများနှင့်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများစွာရှိသည်။ အင်ဂျင်နီယာ၊ နည်းပညာတိုးတက်မှုနှင့်သိပ္ပံနည်းကျရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းကဲ့သို့သောအစီအစဉ်များအတွက်ဂျာမနီတွင်နေ့စဉ်တီထွင်ဆန်းသစ်သောသုတေသနနှင့်အတူတက္ကသိုလ်ရွေးချယ်စရာများစွာရှိသည်။ ဂျာမနီတစ်လွှားတွင်အနုပညာ၊ ဂီတနှင့်စာပေများစွာပါ ၀ င်သည်။
ဂျာမနီ၌အများပြည်သူဆိုင်ရာတက္ကသိုလ် ၄၀၀ ကျော်ရှိသည်။ ၎င်းမှာတက္ကသိုလ်ကျောင်းသား ဦး ရေ၏ ၉၅% ရှိသည်။ ထိုအဖွဲ့အစည်းများသည်ပြည်နယ်ဘဏ္fundာငွေဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာကျောင်းလခသည်အခမဲ့ဖြစ်သည်။ ပုဂ္ဂလိကအဖွဲ့အစည်း ၁၂၀ ခန့်တွင်အစိုးရရန်ပုံငွေမရရှိဘဲပြည်နယ်၏အုပ်ချုပ်မှုအောက်တွင်မရှိပေ။
ဘွဲ့ကြိုဖြေ - ဘွဲ့ဆိုတာ ၃ နှစ်ကနေ ၄ နှစ်အထိကွာပါတယ်။
ဘွဲ့ရသည် မဟာဘွဲ့ - ဒီ ၁ နှစ်မှ ၂ နှစ်အထိအချိန်ပြည့်လေ့လာမှုများပြုလုပ်သည်
ပါရဂူဘွဲ့ / ပါရဂူဘွဲ့ဖြေ - ၃ နှစ်လောက်ကြာတယ်
တိုက်ရိုက်လျှောက်ထားရန်၊ အဆင့်မြင့်ပညာရေးအတွက်အထူးဝက်ဘ်ဆိုက်မှလျှောက်လွှာကို download လုပ်ပါ ဂျာမနီမှာလေ့လာမှု။ သီးခြားလျှောက်လွှာပုံစံကိုတက္ကသိုလ်တစ်ခုထက် ပို၍ လျှောက်လိုသောကျောင်းသားများကဖြည့်စွက်ရမည်။
အကယ်၍ တက္ကသိုလ်မှကျောင်းသားကသူတို့အရည်အချင်းပေါ် မူတည်၍ လက်ခံလျှင်၊ ကျောင်းသားသည်ကမ်းလှမ်းချက်စာကိုလက်ခံရရှိလိမ့်မည်။ ကျောင်းသားများသည်သင်၏စာကိုအတည်ပြုရန်အတွက်ကမ်းလှမ်းချက်ကိုလက်ခံခြင်းအားလက်မှတ်ထိုးခြင်းနှင့်လက်ခံခြင်းအားဖြင့်ဤစာကိုတုံ့ပြန်ရမည်။
ဂျာမနီတွင်နေထိုင်ရန်ကုန်ကျစရိတ် | ဂျာမနီရှိကျောင်းသားများအတွက်နေထိုင်မှုကုန်ကျစရိတ် | ဂျာမနီရှိနိုင်ငံတကာကျောင်းသားများအတွက်နေထိုင်မှုစရိတ်
ဘာလင်တွင်နေထိုင်ရန်ကုန်ကျစရိတ် | Cologne တွင်နေထိုင်ရန်ကုန်ကျစရိတ် | Frankfurt တွင်နေထိုင်ရန်ကုန်ကျစရိတ် | Hamburg တွင်နေထိုင်ရန်ကုန်ကျစရိတ် | ဘာလင်တွင်နေထိုင်သောတွက်ချက်မှုနှုန်း | Cologne ရှိနေထိုင်မှုတွက်ချက်မှုအတွက်ကုန်ကျစရိတ် | နေထိုင်မှုကုန်ကျစရိတ် Frankfurt တွင်နေထိုင်ရန် | နေထိုင်မှုကုန်ကျစရိတ်ဟမ်းဘတ်တွင်နေထိုင်စရိတ်
ဂျာမနီတစ်လွှားတွင်ကျောင်းသားများသည် ၄ ​​င်းတို့၏တက္ကသိုလ်များနှင့်မြို့ကြီးများရှိလူမှုရေးဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများစွာကိုတက်ရောက်ကြသည်။ ဂျာမနီသည်စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းသည့်ယဉ်ကျေးမှုပေါင်းစုံပတ် ၀ န်းကျင်ကိုကမ်းလှမ်းသောကြောင့်လူသိများသည်။ ကျောင်းသားများသည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိလူများနှင့်အတူစာသင်ခန်းများ၌တက်ကြလိမ့်မည်။ သူတို့နေထိုင်ရာမြို့တစ်မြို့လုံး၌ဘာသာစကားများစွာပြောဆိုကြသည်ကိုသတိပြုမိလိမ့်မည်။
မဟာဘွဲ့ကျောင်းသားများသည်နှစ်သက်လေ့ရှိသည် ကျူရှင် - အခမဲ့ပညာရေးသူတို့၏ဘွဲ့အစီအစဉ်သည်ဆက်တိုက်ဖြစ်သည်။ “ အဆက်မပြတ်” သောဒီဂရီများတွင်အစိုးရတက္ကသိုလ်များအတွက်တစ်နှစ်လျှင်ယူရို ၅၀၀၀ အထိနှင့်ပုဂ္ဂလိကတက္ကသိုလ်များအတွက်တစ်နှစ်လျှင်ယူရို ၃၀,၀၀၀ အထိပါ ၀ င်နိုင်သည်။
ပျှမ်းမျှ ဂျာမနီမှာနေထိုင်စရိတ် မြို့ကြီးကြီးများတွင်တစ်လလျှင် ၇၅၀ မှ ၁၀၀၀ အထိရှိသည်။
တိုက်ခန်းငှားမယ်ဆိုရင်တစ်လကိုဒေါ်လာ ၁၀၀၀ လောက်ကုန်ကျမယ်
ဂျာမနီနိုင်ငံတွင်ပျမ်းမျှအစားအသောက်ကျသင့်ငွေမှာတစ်လလျှင် ၂၀၀ မှ ၂၇၀ အထိရှိသည်
ဂျာမနီအတွက်ကျောင်းသားဗီဇာ | ဂျာမနီကျောင်းသားဗီဇာ ကျောင်းသားဗီဇာအတွက်လျှောက်ထားပါ
ဗီဇာအတွက်စံနှုန်းမှာ ၇၄ ယူရိုဖြစ်သည်
လျှောက်ထားသူများသည်သင်၏လျှောက်လွှာရှင်၏ဘဏ်အကောင့်တွင်လစဉ်အနည်းဆုံးယူရို ၃၀၀၀ ကိုပြသခြင်းအားဖြင့်ငွေကြေးအထောက်အပံ့အထောက်အထားကိုတင်ပြသင့်သည် ဂျာမနီမှာနေ.
ဂျာမနီရှိကျောင်းသားများအတွက်အလုပ်လုပ်ခွင့် ဂျာမနီရှိကျောင်းသားဗီဇာအတွက်အလုပ်လုပ်ခွင့် ဂျာမနီသည်နိုင်ငံတကာကျောင်းသားများအတွက်အလုပ်လုပ်ခွင့်
အလုပ်လုပ်ခွင့်သည်လေ့လာမှုခွင့်ပြုချက်သက်တမ်းရှိနေသမျှကာလပတ်လုံးတရားဝင်ဖြစ်သည်။ ကျောင်းသားသည်တစ်ပတ်လျှင် ၂၅ နာရီသာအလုပ်လုပ်နိုင်သည်။ ကျောင်းသားသည်အားလပ်ရက်များနှင့်ကျောင်းပိတ်ရက်များအတွင်းအချိန်ပြည့်အလုပ်လုပ်နိုင်သည်။
ချင်သောကျောင်းသားများ ဂျာမနီမှာအလုပ်လုပ် ကျောင်းပြီးပြီးနောက်နောက်ထပ်အလုပ်ပါမစ်လျှောက်ထားရန်လိုသည်။ ၎င်းသည်ဘွဲ့ရပြီးနောက် ၁ နှစ်အထိဒီမှာအလုပ်လုပ်ခွင့်ရှိသည်။ ဂျာမန်တက္ကသိုလ်.
လက်ရှိစည်းမျဉ်းများအရဂျာမနီ၌ဆုံးဖြတ်ချက်ချရန်မှာ ၁၄ ရက်မှ ၂၁ ရက်ခန့်ကြာသည်။ အလုပ်လုပ်ကိုင်ခွင့်လျှောက်ထားရန်မှာယူရို ၇၅ မှ ၁၅၀ ဖြစ်ပါသည်။ အလုပ်သမားသည်တစ်ပတ်လျှင် ၄၈ နာရီအလုပ်လုပ်ခွင့်ရှိသည်။
ဂျာမနီ၌အလုပ်လုပ်နေစဉ်အလုပ်နှင့်သင်အလုပ်လုပ်မည့်ပြည်နယ်ပေါ် မူတည်၍ အနည်းဆုံးလတစ်လ ၄,၀၃၃ ယူရိုအာမခံနိုင်သည်။
ဂျာမနီနိုင်ငံတွင် ၀ င်ခွင့်လျှောက်ထားရန် ဂျာမနီတွင်ဝင်ခွင့်လျှောက်ထားပါ
သို့ ဂျာမန်တက္ကသိုလ်လျှောက်ထားကျောင်းသားများသည်တက္ကသိုလ်၏သတ်မှတ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီရန်သင့်လျော်သောစာရွက်စာတမ်းများရှိသင့်သည်။ စိတ် ၀ င်စားသည့်တက္ကသိုလ်၏လျှောက်လွှာပုံစံကိုစနစ်တကျဖြည့်စွက်ပြီးလက်မှတ်ရေးထိုးရမည်။ တက္ကသိုလ်များသည်သင့်လျော်သောကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များ၊ ယခင်အရည်အချင်းများ၊ ဘဏ္informationာရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်နှင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များလိုအပ်သည်။
သင်တန်း module များနှင့်အဆင့်များ၏တရားဝင်ဘာသာပြန်ချက်
ဘာသာစကားကျွမ်းကျင်မှု၏သက်သေ - ဂျာမန် (နှင့် / သို့မဟုတ်အင်္ဂလိပ်);
အပိုဆောင်းစာရွက်စာတမ်းများအချို့အားဖြင့်မေးမြန်းနိုင်ပါသည် ဂျာမနီမှာတက္ကသိုလ်များ လိုအပ်ချက်များပေါ်မူတည်။ ။ ပရိုဂရမ်သည်မည်သည့်အထူးပြုမှုအတွက်မဆို GRE၊ GMAT သို့မဟုတ် LSAT ကဲ့သို့သောနောက်ထပ်စစ်ဆေးမှုများအတွက်ရမှတ်များလိုအပ်ပါက။ ထိုအခါရမှတ်လျှောက်ထားခြင်းမပြုမီအဆင်သင့်ဖြစ်သင့်သည်။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကျောင်းသားများသည်သက်သေပြရမည် အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားကျွမ်းကျင်မှု IELTS, TOEFL သို့မဟုတ် C1 အဆင့်မြင့်ဘာသာစကားလက်မှတ်များပေးအပ်ခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်သည်။ ရမှတ်များသည်သတ်မှတ်ထားသည့်နိမ့်ဆုံးဘာသာစကားရသင့်သည် ဂျာမနီမှာတက္ကသိုလ်တွေ။
အကယ်၍ ကျောင်းသားများက၎င်းတို့သည်ဂျာမန်ဘာသာဖြင့်သင်တန်းကိုတက်ရန်ဆုံးဖြတ်သည်ဆိုလျှင်၎င်းတို့သည်အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ရရန်လိုအပ်ပြီးသင်၏စာမေးပွဲများကိုဤဘာသာစကားဖြင့်စီမံခန့်ခွဲနိုင်သည်။ ဤအရာများအနက်မှတစ်ခုရရှိရန်လိုအပ်ချက်များမှာ -
DSH (တက္ကသိုလ် ၀ င်ခွင့်အတွက်ဂျာမန်စာမေးပွဲ) - ဂျာမနီတွင်သာရနိုင်သည်။
TestDaF - ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိနိုင်ငံပေါင်း ၉၀ တွင်ရရှိနိုင်သည်
ဂျာမနီရှိပညာရေး | ငါတို့တစ်နေရာတည်း ဂျာမနီရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ ကျောင်းသားများနှင့်ဆက်သွယ်ခြင်း ဂျာမနီရှိတက္ကသိုလ် နှင့်အခြား 105 နိုင်ငံများ ဂျာမနီအတွက်ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံအဓိကအားဖြင့် ဘာလင်ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ နှင့် Cologne အတွက်ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ နှင့် Frankfurt ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ နှင့် ဟမ်းဘတ်အတွက်ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ အထောက်အပံ့ပေးသောနိုင်ငံ ၁၀၆ နိုင်ငံ ဂျာမနီမှာလေ့လာမှု ဖုံးလွှမ်းထားသောနိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ ခု၊ ဂျာမနီရှိပညာရေးအပါအဝင် ဘာလင်ရှိပညာရေး | Cologne အတွက်ပညာရေး | ဖရန့်ခ်ဖာ့တ်၌ပညာရေး | Hamburg ပညာရေး ).
စျေးသက်သာသောစိတ်ကြိုက်ပညာရေး ၀ န်ဆောင်မှုများ များအတွက်ကျောင်းသားများအတွက်ဂျာမနီ၌တည်၏ ဂျာမနီရှိထိပ်တန်းတက္ကသိုလ်များ, ဂျာမနီရှိပြည်ပရှိထိပ်တန်းတက္ကသိုလ်များ, ဂျာမနီရှိထိပ်တန်းသင်တန်းများ, ဂျာမနီရှိထိပ်တန်း MBA ကောလိပ်များ, ဂျာမနီရှိထိပ်တန်း MS ကောလိပ်များ, ဂျာမနီရှိထိပ်တန်း UG စီးပွားရေးကျောင်းများ, ဂျာမနီရှိထိပ်တန်း MBBS ကောလိပ်များ နှင့်ဂျာမနီမှာများစွာသောပိုပြီးသင်တန်းများ။
ငါတို့နိုင်ငံရပ်ခြား ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ ဂျာမနီမှာလည်းလူသိများ ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ ဂျာမနီအတွက် ပြည်ပမှာပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ ဂျာမနီမှာ, ပြည်ပမှာပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ ဂျာမနီမှာ, နိုင်ငံရပ်ခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ ဂျာမနီမှာ, ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ ဂျာမနီမှာ, ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ ဂျာမနီမှာ, လေ့လာမှုအတိုင်ပင်ခံ ဂျာမနီမှာ, ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ ဂျာမနီမှာ, ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ ဂျာမနီအတွက် နိုင်ငံခြားပညာရေး ဂျာမနီမှအတိုင်ပင်ခံ, ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ ဂျာမနီမှာ, နိုင်ငံခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ ဂျာမနီမှာ, ပြည်ပမှာအတိုင်ပင်ခံ ဂျာမနီမှာ, ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ ဂျာမနီအတွက် ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ ဂျာမနီမှာ, တက္ကသိုလ်အတိုင်ပင်ခံ ဂျာမနီမှာ, ပြည်ပပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ ဂျာမနီမှာ, ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ ဂျာမနီနှင့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ ဂျာမနီမှာ။
ဂျာမနီနိုင်ငံတွင်ပညာသင်ကြားခြင်း * ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျောင်းသားများအတွက်အားမပေးပါ အခမဲ့ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ ဂျာမနီရှိတက္ကသိုလ်များအတွက် နိုင်ငံခြားကျောင်းသားများအတွက်။
ကျွန်ုပ်တို့၏နိုင်ငံရပ်ခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ ဂျာမနီနိုင်ငံမှာလည်းလူသိများတဲ့ \_ t နိုင်ငံခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ ဂျာမနီအတွက် ပြည်ပမှာအတိုင်ပင်ခံ ဂျာမနီအတွက် ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ ဂျာမနီအတွက် ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ ဂျာမနီအတွက် ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ ဂျာမနီအတွက် လေ့လာမှုအတိုင်ပင်ခံ ဂျာမနီအတွက် ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ ဂျာမနီအတွက် ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ ဂျာမနီအတွက် နိုင်ငံရပ်ခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ ဂျာမနီအတွက် ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ ဂျာမနီအတွက် ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ ဂျာမနီအတွက် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ ဂျာမနီအတွက် ပြည်ပမှာပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ ဂျာမနီအတွက် နိုင်ငံခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ ဂျာမနီအတွက် တက္ကသိုလ်အတိုင်ပင်ခံ ဂျာမနီအတွက် ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ ဂျာမနီအတွက် ပြည်ပပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ ဂျာမနီနှင့် ပြည်ပမှာပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ ဂျာမနီအဘို့။
ဘာလင်ရှိတတ်နိုင်သောပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ | Cologne ရှိတတ်နိုင်သည့်ပညာရေးဆိုင်ရာအကြံပေး | ဖရန့်ဖတ်မြို့ရှိစျေးသက်သာပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ | Hamburg ရှိတတ်နိုင်သောပညာရေးဆိုင်ရာအကြံပေး | ဘာလင်ရှိတတ်နိုင်သောပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ | Cologne ရှိတတ်နိုင်သည့်ပညာရေးဆိုင်ရာအကြံပေး | ဖရန့်ဖတ်မြို့ရှိစျေးသက်သာပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ | Hamburg ရှိတတ်နိုင်သောပညာရေးဆိုင်ရာအကြံပေး
ကျောင်းသားတိုင်ပင်ဆွေးနွေး - ပညာရေးဂျာမနီ
ပညာရေးအတွက်စီစဉ် ဂျာမနီမှာ, တက္ကသိုလ်များအတွက်ဝင်ခွင့် ဂျာမနီမှာလေ့လာဖို့ဂျာမနီ၏
သင်တစ်ဦးဖြစ်မည်ဆိုလျှင် နိုင်ငံခြားကျောင်းသား ဘယ်သူလိုအပ်တယ် အစဥ္မျပတ္ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတတ္မႈအတြက္ ရပ္တည္လုပ္ေဆာင္ရန္။ ဘို့ ဂျာမနီဘယ်လိုလုပ် ဝန်ခံချက်ရ in ဂျာမနီ in ဂျာမနီရှိတက္ကသိုလ်များ ဘို့ ဂျာမနီရှိပညာရေး သို့မဟုတ် ဂျာမနီမှာလေ့လာပါ, ဘာလင်ရှိတက္ကသိုလ်များ ဘို့ ဘာလင်ရှိပညာရေး သို့မဟုတ် ဘာလင်မှာလေ့လာပါ, Cologne အတွက်တက္ကသိုလ်များ ဘို့ Cologne အတွက်ပညာရေး သို့မဟုတ် Cologne အတွက်လေ့လာမှု, Frankfurt ရှိတက္ကသိုလ်များ ဘို့ ဖရန့်ခ်ျဖူတ့်ပညာရေး သို့မဟုတ် Frankfurt တွင်လေ့လာသည်, ဟမ်းဘတ်အတွက်တက္ကသိုလ်များ ဘို့ Hamburg ပညာရေး သို့မဟုတ် ဟမ်းဘတ်မှာလေ့လာပါ ဂျာမနီနိုင်ငံမှာအတွေ့အကြုံနှစ်ပေါင်းများစွာရှိခဲ့ပြီ၊ ဘာလင်ရှိကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ , Cologne အတွက်ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ , Frankfurt ရှိကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ , ဟမ်းဘတ်အတွက်ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အထူးပြုနှင့်မိတ်ဖက်စုံလင်အတွက် ဂျာမနီရှိအကောင်းဆုံးပညာရေးအတိုင်ပင်ခံအဓိကအားဖြင့် ဘာလင်တွင်အကောင်းဆုံးပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, Cologne တွင်အကောင်းဆုံးပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ, Frankfurt တွင်အကောင်းဆုံးပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ, ဟမ်းဘတ်အတွက်အကောင်းဆုံးပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ နှင့် ဂျာမနီနိုင်ငံရှိအကောင်းဆုံးတက္ကသိုလ်များ ဂျာမနီမှာပညာသင်ဖို့၊ ဘာလင်ရှိတက္ကသိုလ်များ , Cologne အတွက်တက္ကသိုလ်များ , Frankfurt ရှိတက္ကသိုလ်များ , ဟမ်းဘတ်အတွက်တက္ကသိုလ်များ နှင့်လည်းအတွက်နိုင်ငံတကာတက္ကသိုလ်များနှင့်အတူ 106 နိုင်ငံများ ထောက်ပံ့ရန် ဂျာမနီမှာပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ ထောက်ပံ့ရန်မြို့ကြီး ၃၂၆ ရှိနိုင်ငံတကာတက္ကသိုလ်များအပါအ ၀ င်ဂျာမနီနိုင်ငံမှနိုင်ငံတကာကျောင်းသားများအတွက်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံ ဘာလင်အတွက်ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ , Cologne အတွက်ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ , Frankfurt တွင်ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ , ဟမ်းဘတ်အတွက်ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ နှင့်ဘာလင်အတွက်နိုင်ငံတကာကျောင်းသားများအတွက်မြို့ကြီးများ ၃၂၆၊ ကိုလန်းတက္ကသိုလ်မှနိုင်ငံတကာကျောင်းသားများ၊ ဖရန့်ဖတ်ဖ်အတွက်နိုင်ငံတကာကျောင်းသားများ၊
ဂျာမနီအတွက်နေထိုင်မှုဂဏန်းတွက်စက်၏ကုန်ကျစရိတ် နားလည်ရန် ဂျာမနီရှိကျောင်းသားများအတွက်နေထိုင်စရိတ် အပါအဝင် ဘာလင်အတွက်နေထိုင်မှုဂဏန်းတွက်စက်၏ကုန်ကျစရိတ် နားလည်ရန် ဘာလင်ရှိကျောင်းသားများအတွက်လူနေမှုစရိတ်, Cologne များအတွက်နေထိုင်မှုဂဏန်းတွက်စက်၏ကုန်ကျစရိတ် နားလည်ရန် Cologne ရှိကျောင်းသားများအတွက်နေထိုင်ရန်ကုန်ကျစရိတ်, နေထိုင်မှုကုန်ကျစရိတ် Frankfurt အတွက်တွက်ချက်မှု နားလည်ရန် Frankfurt ရှိကျောင်းသားများအတွက်နေထိုင်ရန်ကုန်ကျစရိတ်, Hamburg အတွက်လူနေမှုစရိတ်တွက်ချက်မှု နားလည်ရန် ဟမ်းဘတ်ရှိကျောင်းသားများအတွက်နေထိုင်ရန်ကုန်ကျစရိတ်
သင်၏လိုအပ်ချက်များကိုကျွန်ုပ်တို့နားလည်ပါသည် ဂျာမနီရှိပညာရေး နှင့်အကြောင်းပြချက် ဂျာမနီကိုလေ့လာဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ကျွန်ုပ်တို့၏အသင်းနှင့်သင်ဆက်သွယ်မည် ဂျာမနီရှိကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ ထို့အပြင်ဆိတ်ကွယ်ရာအခြားနိုင်ငံများအကြံပြုအပ်ပါသည် <="" p="">
သင်၏ဂျာမနီ၌ပညာသင်ကြားရန်သင်လိုအပ်ချက်ကိုကျွန်ုပ်တို့နားလည်ပါသည် ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ ဂျာမနီမှာကျောင်းသားဖြစ်စဉ်တစ်ခုလုံးကမင်းကိုယူမယ် ဗီဇာ ဂျာမနီအတွက် အလုပ်လုပ်ကိုင်ခွင့် ဂျာမနီအတွက်, တခါ ဂျာမနီမှာဝင်ခွင့်ရ in ဂျာမနီရှိတက္ကသိုလ် သို့ ဂျာမနီမှာလေ့လာပါ ဘို့ ဂျာမနီမှာပညာရေး, ဝင်ခွင့် ဘာလင် in ဘာလင်တက္ကသိုလ် သို့ ဘာလင်မှာလေ့လာပါ ဘို့ ဘာလင်အတွက်ပညာရေး, ဝင်ခွင့် Cologne in Cologne အတွက်တက္ကသိုလ် သို့ study in Cologne ဘို့ Cologne အတွက်ပညာရေး, ဝင်ခွင့် Frankfurt in Frankfurt တက္ကသိုလ် သို့ Frankfurt တွင်လေ့လာသည် ဘို့ Frankfurt မှာပညာရေး, ဝင်ခွင့် ဟမ်းဘတ် in ဟမ်းဘတ်အတွက်တက္ကသိုလ် သို့ ဟမ်းဘတ်မှာလေ့လာပါ ဘို့ ဟမ်းဘတ်အတွက်ပညာရေးသင့်အနေဖြင့်အသိပေးဆုံးဖြတ်ချက်ချရန်။
သင်စီစဉ်ထားလျှင် ဂျာမနီမှာလေ့လာမှုငါတို့၏ ပြည်ပမှာအတိုင်ပင်ခံ in ဂျာမနီ သင့်အတွက်လမ်းပြပေးပါလိမ့်မယ် ဂျာမနီမှာဝန်ခံချက် ခင်ဗျားကဂျာမနီမှာပညာသင်ဖို့အတွက်သူတို့မှာလည်းအတွေ့အကြုံတွေရှိတယ် အတွက်ကျောင်းသားများအတွက်ဘဏ်အကောင့်ဖွင့်လှစ် ဂျာမနီ အပါအဝင် ဘာလင်၌ကျောင်းသားများအတွက်ဘဏ်အကောင့်ဖွင့်လှစ် Cologne ရှိကျောင်းသားများအတွက်ဘဏ်စာရင်းဖွင့်လှစ်ခြင်း Frankfurt ရှိကျောင်းသားများအတွက်ဘဏ်စာရင်းဖွင့်လှစ်ခြင်း Hamburg ရှိကျောင်းသားများအတွက်ဘဏ်စာရင်းဖွင့်လှစ်ခြင်း ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပါအဝင် အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင် တွဲဖက် ဂျာမနီ မင်းကိုကူညီနိုင်တယ် တိုက်ခန်းရှာခြင်း or ဘော်ဒါဆောင် ငှားရန်ရှိသည် ဂျာမနီ.
ကျွန်တော်တို့၏ ဂျာမနီရှိပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ သင့်တော်တဲ့အရာကိုရှာတွေ့နိုင်အောင်ကူညီပေးနိုင်တယ် တက္ကသိုလ် ဂျာမနီမှာ။
ငါတို့အသင်း ဂျာမနီမှာပညာရေး သင်လိုအပ်ကောင်းကူညီနိုင်မည့်မည်သည့်အထောက်အပံ့ကိုမဆိုသင့်အားလမ်းညွှန်ပေးနိုင်သည် ဂျာမနီမှာလေ့လာပါသင်ချွေတာရန်အတွက်အချိန်နှင့်ကုန်ကျမှု ဂျာမနီမှာပညာရေး။
အောင်မြင်သည် အတွက်ဝင်ခွင့် ဂျာမနီ အတွက်လေ့လာနေသည် ဂျာမနီမြို့များဖုံးလွှမ်းလျက်ရှိသည် ဘာလင်အတွက်ဝန်ခံချက် ဘို့ ဘာလင်မှာလေ့လာနေ, Cologne အတွက်ဝန်ခံချက် ဘို့ Cologne တွင်လေ့လာနေ, Frankfurt တွင်ဝင်ခွင့် ဘို့ Frankfurt တွင်လေ့လာသည်, ဟမ်းဘတ်အတွက်ဝန်ခံချက် ဘို့ ဟမ်းဘတ်တွင်လေ့လာနေ
ရန်စီစဉ်လျှင် ဂျာမနီမှာလေ့လာမှုထို့နောက်ရွေးစရာတစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန်အရေးကြီးသည် ဂျာမနီမှာမိတ်ဖက် ဂျာမနီ၌သင်တို့၏ဝန်ခံချက်အဘို့, ငါတို့မှာ ထုတ်လုပ်သူသန်း သင်၏အစီအစဉ်များအောင်မြင်ရန်သေချာစေရန်အသင့်ဖြစ်နေသည် လေ့လာချက် ဂျာမနီသို့
သင့်ရဲ့ခွင့်ပြုချက်ပြီးနောက်၏အဖွဲ့ ဂျာမနီရှိကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ သင့်အတွက်သတင်းပို့ရန်ဖြစ်နိုင်ခြေကိုသင့်အားပေးပို့ပါလိမ့်မည် ဂျာမနီရှိပညာရေးအပါအဝင် ကျောင်းသားဗီဇာ ဂျာမနီနှင့်အတူ ဂျာမနီမှာလူနေမှုကုန်ကျစရိတ် for you to understand expenses in Germany in advance before you opt for ဂျာမနီရှိတက္ကသိုလ် လေ့လာရန်သို့မဟုတ် နောက်ထပ်တိုင်းပြည် သင့်ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေပိုကောင်းလိမ့်မယ် အခြားတိုင်းပြည်များကိုစစ်ဆေးပါ, အစား, ဂျာမနီ
ကူညီပေးပါ စာရွက်စာတမ်းများ ဘို့ ဂျာမနီရှိတက္ကသိုလ်မှဝန်ခံချက်.
ကြီးကြပ်သည် သင့်အတွက်ဖြစ်စဉ် ဂျာမနီရှိတက္ကသိုလ်မှဝန်ခံချက်.
ဘာလင်မှာလေ့လာပါ | Cologne တွင်လေ့လာပါ | Frankfurt တွင်လေ့လာပါ | ဟမ်းဘတ်တွင်လေ့လာပါ
ဂျာမနီနှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၅ နိုင်ငံအတွက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပညာရေးမိတ်ဖက်အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအောင်မြင်မှုရရှိရန်ကူညီသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဂျာမနီရှိဈေးသက်သာသည့်အကောင်းဆုံးတက္ကသိုလ်များနှင့် ၁၀၆ နိုင်ငံတွင်အိမ်တစ်လုံးအောက်၌ရှိသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဂျာမနီအပါအ ၀ င်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံရှိတက္ကသိုလ်များအတွက်ကျောင်းသားများကို ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည်
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဂျာမနီ၌သင်တို့၏ ၀ င်ခွင့်ကိုလက်ခံပါကအပြည့်အဝထောက်ခံပါလိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဂျာမနီ၌ပညာသင်ရန်အတွက် 1 point of contact တစ်ခုပေးခြင်းအားဖြင့်သင်၏ ၀ င်ခွင့်ကိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းဖြင့်ဒီမှာဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏ပညာရေးဂျာမနီအတွက်သင်၏ရည်မှန်းချက်အတွက်ပူးပေါင်းပါကကျွန်ုပ်တို့၏အတွေ့အကြုံဖြစ်သည် ဂျာမနီရှိ mCare ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံအပါအဝင် ဘာလင်ရှိ mCare ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ နှင့် Cologne ရှိ mCare ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ နှင့် Frankfurt ရှိ mCare ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ နှင့် ဟမ်းဘတ်ရှိ mCare ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ အထောက်အပံ့ပေးသောနိုင်ငံ ၁၀၆ နိုင်ငံ ဂျာမနီမှာလေ့လာပါ သင်ဂျာမနီကိုပြောင်းရွှေ့သည့်အခါပထမသုံးလတွင်သင့်ကိုခွဲဝေပေးလိမ့်မည်။ သူသည်သင်၏ဂျာမနီအတွက်သင်နှင့်အဆက်အသွယ်တစ်နေရာဖြစ်လိမ့်မည်။ သင်၏ကျောင်းသားဗီဇာလုပ်ငန်းစဉ်ကိုဂျာမနီအတွက်သေချာစေမည်၊ ဂျာမနီရှိအဆောင် / တိုက်ခန်း၊ အချိန်ပိုင်းအလုပ်အတွက် ဂျာမနီနိုင်ငံ၊ မင်းတို့ကိုနားလည်ပေးပြီးသင်အချိန်၊ ပိုက်ဆံနှင့်ဂျာမနီရှိအားထုတ်မှုများကိုကယ်တင်ရန်ကူညီပေးသောလူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး တစ်ယောက်၏စောင့်ရှောက်မှုကိုခံယူခဲ့သည်
သငျသညျရောက်နေတယ်ဆိုရင် နိုင်ငံခြားကျောင်းသား ကိုလိုက်ရှာသည် ဂျာမနီမှာဝန်ခံချက်တစ်ဦးအတွက် တက္ကသိုလ် or ဂျာမနီမှာကောလိပ်ထို့နောက်ကျွန်ုပ်တို့၏နိုင်ငံတကာ Student Consultants in Germany, အထူးထောက်ခံမှုပေးနိုင်ပါသည်။
ငါတို့သည်သင်တို့ကိုဂျာမနီနှင့် 105 နိုင်ငံများရှိအခြားတက္ကသိုလ်များသည်။
ဂျာမနီရှိ One Stop Shop နှင့်ပညာရေးအတွက်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆
ဂျာမနီရှိနိုင်ငံခြားကျောင်းသားများအတွက်ဂျာမနီရှိစျေးနှုန်းချိုသာသောဥပဒေဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုများ အခမဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးထွက် Out ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဂျာမနီနိုင်ငံရှိကျွန်ုပ်တို့၏လိုက်နာကျင့်ဆောင်မှုဆိုင်ရာအဖွဲ့သည်ကျောင်းသားတစ် ဦး အနေနှင့်ဂျာမနီ၌သင်လိုအပ်သည့်မည်သည့်ထောက်ပံ့မှုမျိုးကိုမဆိုလုံ့လဝီရိယရှိရှိကျွမ်းကျင်စွာကျွမ်းကျင်ထားသူဖြစ်သည်။
မကြာခဏမေးသောမေးခွန်းများ - ဂျာမနီကိုပညာရေး
ဂျာမနီအတွက်ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ ဂျာမနီမှပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံသို့မဟုတ်ဂျာမနီမှကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံများကဂျာမနီရှိတက္ကသိုလ် ၀ င်ခွင့်အတွက်သတင်းအချက်အလက်ကိုဘယ်လိုပေးမလဲ။
ဂျာမနီ၏ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံကထောက်ပံ့ပေး ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံဂျာမနီလည်းအဖြစ်လူသိများ ပြည်ပမှာဂျာမနီ၏ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ပြည်ပမှာဂျာမနီ၏ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ဂျာမနီ၏နိုင်ငံခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ဂျာမနီ၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ဂျာမနီ၏ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ဂျာမနီ၏ရေခြားမြေခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ဂျာမနီ၏ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ဂျာမနီ၏ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ, ဂျာမနီ၏နိုင်ငံခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ဂျာမနီအတွက်ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ, ဂျာမနီ၏လေ့လာမှုအတိုင်ပင်ခံ, ဂျာမနီ၏နိုင်ငံခြားရေးပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ဂျာမနီအတွက်ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ, ဂျာမနီ၏ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ဂျာမနီ၏ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ဂျာမနီတက္ကသိုလ်အတိုင်ပင်ခံ, ဂျာမနီ၏ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံနှင့်ပြည်ပမှာလေ့လာ ဂျာမနီ၏အတိုင်ပင်ခံ။
ဘယ်လိုသတင်းအချက်အလက်ရရန် ဂျာမနီအတွက်ကျောင်းသားဗီဇာလျှောက်ထားပါ, ဘယ်လိုရရန် ဂျာမနီအတွက်ကျောင်းသားဗီဇာ , ဂျာမနီ ကျောင်းသားဗီဇာလုပ်ငန်းစဉ်လျှောက်ထားပုံနှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းအချက်အလက်ရယူရန် ဂျာမနီအတွက်ကျောင်းသားဗီဇာ, ဘယ်လိုရရန် ဂျာမနီအတွက်ကျောင်းသားဗီဇာ, ဂျာမနီ ကျောင်းသားဗီဇာလုပ်ငန်းစဉ်, ဂျာမနီကျောင်းသားဗီဇာစည်းမျဉ်းများ, ဂျာမနီကျောင်းသားဗီဇာအပြောင်းအလဲအချိန်။ ပြောပါ ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ ဂျာမနီအဘို့။ ဘာလင်များအတွက်ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ, ဘာလင်အတွက်ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ဘာလင်အတွက်နိုင်ငံခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ဘာလင်ရှိကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ , ဘာလင်အတွက်ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ, ဘာလင်အတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ပြည်ပမှာဘာလင်အတွက်ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ဘာလင်အတွက်ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ဘာလင်အတွက်နိုင်ငံခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ဘာလင်အတွက်ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ, ပြည်ပမှာဘာလင်အတွက်ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ဘာလင်အတွက်ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ , ဘာလင်အတွက်အတိုင်ပင်ခံလေ့လာပါ ဘာလင်ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ ဘာလင်မှပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ နိုင်ငံခြားမှဘာလင်ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ ဘာလင်မှနိုင်ငံခြားအတိုင်ပင်ခံ၊ ဘာလင်ရှိနိုင်ငံရပ်ခြားပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံနှင့်ဘာလင်ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ Cologne များအတွက်ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ, Cologne အတွက်ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, Cologne အတွက်နိုင်ငံခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, Cologne အတွက်ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ , Cologne အတွက်ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ, Cologne အတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, Cologne အတွက်ပြည်ပမှာပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, Cologne အတွက်ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, Cologne အတွက်နိုင်ငံခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, Cologne အတွက်ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ, Cologne အတွက်ပြည်ပမှာပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, Cologne များအတွက်ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ , Cologne အတွက်အတိုင်ပင်ခံလေ့လာပါ Cologne ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ Cologne ရှိပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ၊ Cologne ရှိနိုင်ငံရပ်ခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ၊ Cologne ရှိနိုင်ငံခြားမှအတိုင်ပင်ခံ၊ Cologne ရှိနိုင်ငံရပ်ခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံနှင့် Cologne ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ။ Frankfurt အတွက်ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ, Frankfurt ရှိပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ဖရန့်ဖတ်၌နိုင်ငံခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, Frankfurt ရှိကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ , Frankfurt တွင်ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ, Frankfurt ရှိကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ပြင်သစ်နိုင်ငံ၊, Frankfurt ရှိပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, Frankfurt မှာရှိတဲ့နိုင်ငံခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, Frankfurt မှာရှိတဲ့ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ, Frankfurt ရှိပြည်ပတွင်ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ, Frankfurt အတွက်ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ , Frankfurt တွင်အတိုင်ပင်ခံလေ့လာပါ , Frankfurt ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ Frankfurt ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ Frankfurt ရှိနိုင်ငံရပ်ခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ၊ Frankfurt ရှိနိုင်ငံခြားအတိုင်ပင်ခံ၊ ဟမ်းဘတ်အတွက်ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ, ဟမ်းဘတ်အတွက်ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ဟမ်းဘတ်အတွက်နိုင်ငံခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ဟမ်းဘတ်အတွက်ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ , ဟမ်းဘတ်အတွက်ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ, ဟမ်းဘတ်အတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, နိုင်ငံခြားဟမ်ဘတ်အတွက်ပြည်ပမှာပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ဟမ်းဘတ်အတွက်ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ဟမ်းဘတ်အတွက်နိုင်ငံခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ဟမ်းဘတ်အတွက်ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ, ပြည်ပရောက်ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံဟမ်ဘာ့ဂ်, ဟမ်းဘတ်အတွက်ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ , ဟမ်းဘတ်အတွက်အတိုင်ပင်ခံလေ့လာပါ , ဟမ်းဘတ်အတွက်ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ, ဟမ်းဘတ်အတွက်ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ, ဟမ်းဘတ်အတွက်နိုင်ငံခြားမှပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ဟမ်းဘတ်အတွက်နိုင်ငံခြားအတိုင်ပင်ခံ, ဟမ်းဘတ်အတွက်နိုင်ငံခြားရေးပညာရေးအတိုင်ပင်ခံနှင့်ဟမ်းဘတ်အတွက်ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ။ ကျောင်းသားဗီဇာစည်းမျဉ်းများ၊ ဂျာမနီကျောင်းသားဗီဇာအပြောင်းအလဲအချိန်။ ဂျာမနီအတွက်ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံနှင့်စကားပြောပါ။ ဘာလင်ရှိအတိုင်ပင်ခံ၊ ဘာလင်မှပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ ဘာလင်ရှိနိုင်ငံခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ၊ ဘာလင်ရှိကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ၊ ဘာလင်ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ ဘာလင်ရှိကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ၊ ဘာလင်နိုင်ငံရှိပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ၊ ဘာလင်ရှိပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ၊ ဘာလင်ရှိနိုင်ငံခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ၊ ဘာလင်ရှိနိုင်ငံခြားအတိုင်ပင်ခံ၊ ဘာလင်မှပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ ဘာလင်၌ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ၊ ဘာလင်၌လေ့လာမှုအကြံပေးခြင်း၊ ဘာလင်ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ ဘာလင်ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ ဘာလင်နိုင်ငံရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ ဒီနေ့ဘာလင်မှာ။ ကျောင်းသားဗီဇာစည်းမျဉ်းများ၊ ဂျာမနီကျောင်းသားဗီဇာအပြောင်းအလဲအချိန်။ ဂျာမနီအတွက်ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံနှင့်စကားပြောပါ။ student consultants for Cologne, education consultant in Cologne, foreign education consultancy in Cologne, student Consultants in Cologne, educational consultancy in Cologne, global educational consultants in Cologne, abroad education consultants in Cologne, educational Consultants in Cologne, foreign education consultants in Cologne, educational consultancy in Cologne, abroad education consultant in Cologne, student consultant for Cologne, study consultancy in Cologne, education consultancy in Cologne, education consultants in Cologne, abroad education consultants in Cologne, study abroad consultants in Cologne, overseas educational consultants in Cologne and educational consultant in Cologne today. ကျောင်းသားဗီဇာစည်းမျဉ်းများ၊ ဂျာမနီကျောင်းသားဗီဇာအပြောင်းအလဲအချိန်။ ဂျာမနီအတွက်ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံနှင့်စကားပြောပါ။ Frankfurt ရှိအတိုင်ပင်ခံကျောင်းသား၊ Frankfurt ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ Frankfurt ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ Frankfurt ရှိကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ၊ Frankfurt ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ Frankfurt ရှိကမ္ဘာ့ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ နိုင်ငံရပ်ခြားရှိ Frankfurt ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ Frankfurt ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ ဖရန့်ခ်ဖာ့တ်တွင်နိုင်ငံခြားအတိုင်ပင်ခံ၊ ဖရန့်ကတ်ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ ဖရန့်ကတ်ကျောင်းရှိအတိုင်ပင်ခံ၊ ဖရန့်ကတ်၌လေ့လာမှုအကြံပေး၊ ဖရန့်၊ ဖ Frankfurt တွင်ပညာရေးအကြံပေး၊ ဒီနေ့ Frankfurt မှာ။ ကျောင်းသားဗီဇာစည်းမျဉ်းများ၊ ဂျာမနီကျောင်းသားဗီဇာအပြောင်းအလဲအချိန်။ ဂျာမနီအတွက်ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံနှင့်စကားပြောပါ။
ဘာဖြစ်သလဲ LivingGermany ၏ကုန်ကျစရိတ် or လူနေမှုဂဏန်းတွက်စက်ဂျာမနီ၏ကုန်ကျစရိတ် , ကျောင်းသားများအတွက်ဂျာမနီ၌နေထိုင်မှု၏ကုန်ကျစရိတ်, နိုင်ငံတကာကျောင်းသားများအတွက်ဂျာမနီတွင်နေထိုင်ရန်ကုန်ကျစရိတ်အပါအဝင် အိန္ဒိယကျောင်းသားများအတွက်ဂျာမနီတွင်နေထိုင်ရန်ကုန်ကျစရိတ်, ပါကစ္စတန်ကျောင်းသားများအတွက်ဂျာမနီတွင်နေထိုင်ရန်ကုန်ကျစရိတ်, ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကျောင်းသားများအတွက်ဂျာမနီတွင်နေထိုင်ရန်ကုန်ကျစရိတ်, အင်ဒိုနီးရှားကျောင်းသားများအတွက်ဂျာမနီတွင်နေထိုင်ရန်ကုန်ကျစရိတ် or အာဖရိကမှကျောင်းသားများအတွက်ဂျာမနီတွင်နေထိုင်ရန်ကုန်ကျစရိတ်?
ကျနော်တို့အခြေခံသတင်းအချက်အလက်ပေးဖို့ကြိုးစားခဲ့ပြီ ဂျာမနီများအတွက်လူနေမှုတွက်ချက်မှု၏ကုန်ကျစရိတ်ပါဝင်သည် ဂျာမနီမှာနေထိုင်မှု၏ကုန်ကျစရိတ်, ဂျာမနီ၏လူနေမှုဂဏန်းတွက်စက်၏ကုန်ကျစရိတ်, ကျောင်းသားများအတွက်ဂျာမနီ၌နေထိုင်မှု၏ကုန်ကျစရိတ်, နိုင်ငံတကာကျောင်းသားများအတွက်ဂျာမနီတွင်နေထိုင်ရန်ကုန်ကျစရိတ်အလွန်အခြေခံကျသည် ဂျာမနီမှာသတင်းအချက်အလက်လူနေမှုကုန်ကျစရိတ်.
ဘာလင်တွင်နေထိုင်ရန်ကုန်ကျစရိတ် | Cologne တွင်နေထိုင်ရန်အတွက်ကုန်ကျစရိတ် | Frankfurt တွင်နေထိုင်ရန်ကုန်ကျစရိတ် | Hamburg တွင်နေထိုင်ရန်ကုန်ကျစရိတ် | ဘာလင်တွင်နေထိုင်သောတွက်ချက်မှုနှုန်း | Cologne ရှိနေထိုင်မှုတွက်ချက်မှုအတွက်ကုန်ကျစရိတ် | နေထိုင်မှုကုန်ကျစရိတ် Frankfurt တွင်နေထိုင်ရန် | နေထိုင်မှုကုန်ကျစရိတ် Hamburg တွင်နေထိုင်သည်
ဂျာမနီ၊ ကောလိပ် ၀ င်ခွင့်ဂျာမနီ၊ ကောလိပ် ၀ င်ခွင့်ဂျာမနီ၊ ဂျာမနီ၊ ၀ င်ခွင့်ဂျာမနီ၊ ဂျာမနီ၊ MBBS ဝန်ခံချက်ဂျာမနီ၊ ဂျာမနီ၊ ၀ င်ခွင့်လိုအပ်ချက်ဂျာမနီ၊ ဂျာမနီ၊ ကောလိပ်ဝင်ခွင့်ဂျာမနီ၊ ဂျာမနီ၊ ကောလိပ်ဝင်ခွင့်ဂျာမနီ ၊?
ကျွန်တော်တို့၏ ဂျာမနီရှိအသိအမှတ်ပြုကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ အဘို့သင့်လိုအပ်ချက်အပေါ်အခြေခံပြီး ဂျာမနီမှာကျောင်းဝင်ခွင့် သင်၏မေးခွန်းကိုဖြေဆိုနိုင်ပါလိမ့်မည် စီးပွားရေးသင်တန်းဝန်ခံချက်ဂျာမနီ, mba ဝန်ခံချက်ဂျာမနီ, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာလက်ခံဂျာမနီ, ဂျာမနီသင်တန်းတက်ရန်ဂျာမနီ, ကောလိပ်ဝင်ခွင့်ဂျာမနီကူညီ, ဝန်ခံချက်လိုအပ်ချက်များကိုဂျာမနီ, ဝန်ခံချက်ဂျာမနီ, ဂျာမနီနိုင်ငံဘွဲ့သင်တန်းတက်ရောက်ရန်, MBBS ဝန်ခံချက်ဂျာမနီ, ကောလိပ်ဝင်ခွင့်ဂျာမနီ, ဝင်ခွင့်ဂျာမနီ, ကောလိပ်ဝန်ခံချက်အကူအညီဂျာမနီ, ကောလိပ်ဝင်ခွင့်ဂျာမနီ နှင့် ဝန်ခံချက်ကိုဖွင့်ဂျာမနီ.
ဂျာမနီတွင်အွန်လိုင်း ၀ င်ခွင့်လျှောက်ထားခြင်း (သို့) ဂျာမနီရှိအွန်လိုင်းပညာရေးကိုလျှောက်ထားနိုင်ပါသလား။
အလိုလျှင် ဂျာမနီမှာတက္ကသိုလ် ခွင့်ပြု ဂျာမနီတွင်အွန်လိုင်းဝင်ခွင့် or ဂျာမနီမှာအွန်လိုင်းပညာရေး or ဂျာမနီရှိအွန်လိုင်းသင်တန်းများထို့နောက် ဂျာမနီများအတွက်ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ ထောက်ပံ့နိုင်ပါလိမ့်မည်။ ငါတို့ဆက်သွယ်ပါ ဂျာမနီမှာအတိုင်ပင်ခံလေ့လာပါ, ဂျာမနီရှိနိုင်ငံရပ်ခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ဂျာမနီမှာပြည်ပမှာပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ဂျာမနီမှာပြည်ပမှာပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ဂျာမနီမှာပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ
ဂျာမနီရှိအွန်လိုင်းသင်တန်းများတွင် ၀ င်ရန်အတွက်ဂျာမနီအတွက်ပညာရေးဆိုင်ရာအကြံဥာဏ်ပေးပါသလား။ ဂျာမနီတွင်အွန်လိုင်း ၀ င်ခွင့်အတွက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသလား။ ဂျာမနီရှိအွန်လိုင်းပညာရေးကိုလျှောက်ထားနိုင်ပါသလား။
အလိုလျှင် ဂျာမနီမှာတက္ကသိုလ် ခွင့်ပြု ဂျာမနီတွင်အွန်လိုင်းဝင်ခွင့် or ဂျာမနီမှာအွန်လိုင်းပညာရေး or ဂျာမနီရှိအွန်လိုင်းသင်တန်းများထို့နောက် ဂျာမနီများအတွက်ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ ထောက်ပံ့နိုင်လိမ့်မည်။ "
ဘာလင်ရှိအွန်လိုင်းသင်တန်းများ | Cologne တွင်အွန်လိုင်းသင်တန်းများ | ဖရန့်ခ်ဖ်တ့်၌အွန်လိုင်းသင်တန်းများ | ဟမ်းဘတ်တွင်အွန်လိုင်းသင်တန်းများ | ဘာလင်ရှိအွန်လိုင်းသင်တန်း | Cologne အတွက်အွန်လိုင်းသင်တန်း | ဖရန့်ဖတ်၌အွန်လိုင်းသင်တန်း | ဟမ်းဘတ်တွင်အွန်လိုင်းသင်တန်း
ဘို့ ဝင်ခွင့်ပေးခြင်း တစ်ဦးအတွက် ဂျာမနီရှိတက္ကသိုလ်, ဂျာမနီရှိပညာရေး ဦး စီးဌာန or ဂျာမနီရှိပညာရေးဝန်ကြီးဌာန များအတွက်အခြေခံသတင်းအချက်အလက်ပေးပါသည် ဂျာမနီရှိနိုင်ငံခြားကျောင်းသားများအတွက် ၀ င်ခွင့်, ဂျာမနီအတွက်ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ ကက ဂျာမနီရှိပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုလည်းပေးလိမ့်မည် ဂျာမနီမှာပြည်ပမှာလေ့လာပါ or ဂျာမနီမှာလေ့လာပါ။ ဒါ့အပြင်၏ဝဘ်ဆိုဒ်ကိုကြည့်ပါ ပညာရေးဦးစီးဌာန, ဂျာမနီ / ၏ဝက်ဘ်ဆိုက် ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန, ဂျာမနီ။
ဘာလင်မှာလေ့လာပါ | Cologne တွင်လေ့လာပါ | Frankfurt တွင်လေ့လာပါ | ဟမ်းဘတ်တွင်လေ့လာပါ | ဘာလင်မှာပြည်ပမှာလေ့လာပါ | Cologne အတွက်ပြည်ပမှာလေ့လာပါ | ဖရန့်ဖတ်၌နိုင်ငံခြားတွင်ပညာသင်ပါ | Hamburg မှာပြည်ပမှာလေ့လာပါ
ဂျာမနီအတွက်ကျောင်းသားဗီဇာဘယ်လိုရနိုင်မလဲ၊ ဂျာမနီအတွက်ကျောင်းသားဗီဇာဘယ်လိုလျှောက်ရမလဲ၊ ဂျာမနီကျောင်းသားဗီဇာစည်းကမ်းများ၊ ဂျာမနီကျောင်းသားဗီဇာလုပ်ငန်းစဉ်၊
လျှောက်ထားရန်မည်သို့သတင်းအချက်အလက်ရရှိရန် ဂျာမနီအတွက်ကျောင်းသားဗီဇာ, ဘယ်လိုရရန် ဂျာမနီအတွက်ကျောင်းသားဗီဇာ, ဂျာမနီကျောင်းသားဗီဇာလုပ်ငန်းစဉ်, ဂျာမနီကျောင်းသားဗီဇာစည်းမျဉ်းများ, ဂျာမနီကျောင်းသားဗီဇာအပြောင်းအလဲနဲ့ အချိန်အဆက်အသွယ် ဂျာမနီအတွက်ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ.
ကျွန်ုပ်သည်ဂျာမနီနိုင်ငံရှိကျောင်းသားများ၏အလုပ်လုပ်ခွင့်လက်မှတ် (သို့) ကျောင်းသားဗီဇာလျှောက်ထားနိုင်ပါသလား။
ကျနော်တို့များအတွက်စည်းမျဉ်းများစာရင်းပြုစုပါပြီ ဂျာမနီရှိကျောင်းသားများအတွက်အလုပ်လုပ်ခွင့် အပေါ်က ဂျာမနီကျောင်းသားအလုပ်လုပ်ကိုင်ခွင့် or ဂျာမနီကျောင်းသားဗီဇာဝန်ခံချက်ပြီးနောက်အလုပ်လုပ်ခွင့် ဂျာမနီရှိတက္ကသိုလ်၌။ အဖြစ်လူသိများ, ဂျာမနီမှာပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ, ဂျာမနီမှာနိုင်ငံခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, education consultants in Germany, ဂျာမနီအတွက်ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ, ဂျာမနီမှာပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ဂျာမနီရှိနိုင်ငံရပ်ခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ဂျာမနီမှာပြည်ပမှာပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, education consultant in Germany, education consultancy in Germany, foreign education consultants in Germany, study abroad consultants in Germany, abroad education consultant in Germany, student consultant for Germany, education Consultancy in Germany, study consultancy in Germany, abroad education consultants in Germany, educational consultancy in Germany, global educational consultants in Germany, education consultant in Berlin, educational consultancy in Berlin, educational consultant in Berlin, foreign education consultants in Berlin, student consultants for Berlin, abroad education consultant in Berlin, overseas educational consultants in Berlin, university consultancy in Berlin, student Consultants in Berlin, abroad education consultants in Berlin, education consultancy in Berlin, foreign education consultancy in Berlin, study consultancy in Berlin, educational Consultants in Berlin, study abroad consultants in Berlin, abroad education consultants in Berlin, global educational consultants in Berlin, education consultants in Berlin, student consultant for Berlin, educational consultancy in Berlin education consultant in Cologne, educational consultancy in Cologne, educational consultant in Cologne, foreign education consultants in Cologne, student consultants for Cologne, abroad education consultant in Cologne, overseas educational consultants in Cologne, university consultancy in Cologne, student Consultants in Cologne, abroad education consultants in Cologne, education consultancy in Cologne, foreign education consultancy in Cologne, study consultancy in Cologne, educational Consultants in Cologne, study abroad consultants in Cologne, abroad education consultants in Cologne, global educational consultants in Cologne, education consultants in Cologne, student consultant for Cologne, educational consultancy in Cologne education consultant in Frankfurt, educational consultancy in Frankfurt, educational consultant in Frankfurt, foreign education consultants in Frankfurt, student consultants for Frankfurt, abroad education consultant in Frankfurt, overseas educational consultants in Frankfurt, university consultancy in Frankfurt, student Consultants in Frankfurt, abroad education consultants in Frankfurt, education consultancy in Frankfurt, foreign education consultancy in Frankfurt, study consultancy in Frankfurt, educational Consultants in Frankfurt, study abroad consultants in Frankfurt, abroad education consultants in Frankfurt, global educational consultants in Frankfurt, education consultants in Frankfurt, student consultant for Frankfurt, educational consultancy in Frankfurt education consultant in Hamburg, educational consultancy in Hamburg, educational consultant in Hamburg, foreign education consultants in Hamburg, student consultants for Hamburg, abroad education consultant in Hamburg, overseas educational consultants in Hamburg, university consultancy in Hamburg, student Consultants in Hamburg, abroad education consultants in Hamburg, education consultancy in Hamburg, foreign education consultancy in Hamburg, study consultancy in Hamburg, educational Consultants in Hamburg, study abroad consultants in Hamburg, abroad education consultants in Hamburg, global educational consultants in Hamburg, education consultants in Hamburg, student consultant for Hamburg, educational consultancy in Hamburg . ဂျာမနီရှိအကောင်းဆုံးပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ.
ဂျာမနီရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံသို့မဟုတ်ဂျာမနီရှိကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံများအကြားခြားနားချက်ကဘာလဲ ဘာလင်ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ or ဘာလင်ရှိကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ Cologne အတွက်ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ or Cologne အတွက်ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ Frankfurt ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ or Frankfurt ရှိကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ ဟမ်းဘတ်အတွက်ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ or ဟမ်းဘတ်အတွက်ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ ?
ဤရွေ့ကားများအတွက်အသုံးပြုကွဲပြားခြားနားသောသတ်မှတ်ချက်များဖြစ်ကြသည် ဂျာမနီရှိပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ဂျာမနီရှိကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံအခြားအသုံးအနှုန်းများမှာ ဂျာမနီမှာကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ဂျာမနီမှာပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ဂျာမနီမှာပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ဂျာမနီမှာအတိုင်ပင်ခံလေ့လာပါ, ဂျာမနီမှာပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ, ဂျာမနီမှာနိုင်ငံခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ဂျာမနီမှာပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ဂျာမနီမှာနိုင်ငံခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ဂျာမနီရှိနိုင်ငံရပ်ခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ဂျာမနီရှိတက္ကသိုလ်အတိုင်ပင်ခံ, ဂျာမနီမှာပြည်ပမှာပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ဂျာမနီမှာပြည်ပမှာပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ
၀ င်ခွင့်အတွက်အခမဲ့အကြံဥာဏ်တောင်းခံပါ ဂျာမနီ
ဘာလင်တက္ကသိုလ်မှ ၀ င်ခွင့် Cologne တက္ကသိုလ်မှဝင်ခွင့် | Frankfurt ရှိတက္ကသိုလ်သို့ ၀ င်ရောက်ခြင်း ဟမ်းဘတ်တက္ကသိုလ်မှဝင်ခွင့်
စာရင်းအင်း Bundesamt Deutschland
စီးပွားရေးနှင့်နည်းပညာ ၀ န်ကြီးဌာန (www.bmwi.de)
Wirtschaft und Arbeit မှ Bundesministerium
Nuremberg လေဆိပ် (Flughafen Nürnberg)
Köln Bonn လေဆိပ်
Leipzig / Halle လေဆိပ်
Deutsche Bahn AG က
အချိန်ဇယားနှင့် Deutsche Bahn ၏လက်မှတ်များ
Deutsche Kultur အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ
MASALA Welt-Beat ပွဲတော်
ဘာလင်၏ Humboldt University က
RWTH Aachen တက္ကသိုလ်
Goethe တက္ကသိုလ် Frankfurt
Ruhr- တက္ကသိုလ် Bochum
Imp ။ အင်ဖို - ကျွန်ုပ်တို့သည်လင့်ခ်ကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။ ဂျာမနီပညာရေး ဦး စီးဌာန / ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနဂျာမနီ မည်သည့်တိုက်ရိုက်ထောက်ခံမှုသည်။